DHAGEYSO :-Odayaasha Somaliyeed oo Ku dhawaaqay War ka Nixiyay AMISOM – Djiboutination
HomeNews DHAGEYSO :-Odayaasha Somaliyeed oo Ku dhawaaqay War ka Nixiyay AMISOM DHAGEYSO :-Odayaasha Somaliyeed oo Ku dhawaaqay War ka Nixiyay AMISOM
- December 19, 2016 - in News 485 0 script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
Iyadoo maalintii shalay ahayd ay soo baxeen warar sheegaya in AMISOM dad rayid ahi ay ku xasuuqeen deegaano ka tirsan Gobolka Sh/hoose ayaa arimahaasi siyaabooyin kala duwan uga hadlay dadka hormuudka u ah shacabka Somaliyeed.
Golaha Dhaqanka iyo Midnimada Beelaha oo ka hadlay dhacdadaan foosha xun ay ku kaceen ciidamada AMISOM ayaay waxay ku baaqeen in la iska dhiciyo hada wixii ka danbeeya.
Guddoomiyaha Golaha Dhaqanka iyo Midnimada Beelaha Hawiye Xaaji Max’ed Xasan Xaad oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay iney ka xun yihiin in AMISOM ay xasuuqaan shacabka Somaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan Gobolka Sh/hoose.
Xaaji Xaad ayaa ku baaqay in hada wixii ka danbeeyo la iska dhicinayo Ciidamada AMISOM loogana hari doonin xasuuqa ka hadalka lahayn ee shacabka u geysanayaan.
Ciidamada AMISOM ayaa shalay ku dilay deegaano hoostaga Gobolka Sh/hoose dad rayid ah oo waxba galabsan oo qaarkood gaari ay marsiiyeen.
Previous article DAAWO: Warqad uu Maxamed Cali Kalaay u Diray Mandela oo gaartay qiimihii ugu Sareeyay Ee Warqad lagu iibsado+Maxaa ku Qornaa Next article Gunman who wounded 3 Somali’s at Zurich Mosque is dead: police About the author djibouti